IShedi yamalahle eFittie endala-icala lolwandle
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguShona
Le gem incinci yaqala ubomi bayo njengeshedi yamalahle endala, kodwa ngoku inika iindwendwe zethu indawo entle yokurhoxa, kanye embindini welali eyimbali iFootdee, eyaziwa ekuhlaleni njengeFittie. Ilali yaseFittie kukuhamba ngemizuzu engama-20 ukusuka kumbindi wesixeko, kwaye ulwandle kunye nazo zonke izinto ezinomtsalane, lusemnyango wakho. Yimbali kwaye imnandi ngebhonasi yokuhlala elunxwemeni nekofu yasekuseni, idolphin ibukele okanye ibukele izikhephe eziza nokuphuma kwizibuko.
IShedi yamalahle eNdala yindawo epholileyo, engaqhelekanga, ekwaziyo ukuzilawula, eyakhiwe apho ishedi yamalahle yayihlala khona. Kumgangatho osezantsi kukho indawo yokuphumla ethandekayo enekhitshi .negumbi lokuhlambela langoku, elinejethi yeGrohe kunye nezindlu zangasese zaseSkotlani. .Nangona i-oveni ingekho, unayo i-microwave, i-toaster, iketile, ifriji egcweleyo, umatshini wekofu we-nespresso, isinki yekhitshi kunye nazo zonke izixhobo.
Kukwakho nomlilo opholileyo kunye neTV enomdlali wedvd odibeneyo. Kukho ngaphezu kwe-150 ii-dvd, iincwadi kunye nemidlalo yebhodi
Phezulu kwigumbi lokulala kukho ibhedi enkulu eyokozelayo eyinkosi enkulu, indawo yokugcina ejingayo, kunye netreyi encomekayo enewiski kunye nobusi ukuze uzenzele itoddy eshushu ngexesha lokulala.
Kukwakho nesixhobo esomisa iinwele kunye nesilungisa, intsimbi, ibhodi yoku-ayina kunye ne-tv ene-dvd kwindawo yokulala. Kukho isithuba sebhedi yokuhamba, kodwa nceda unike isaziso seeyure ezingama-48 ukuba uthatha ibhedi yohambo kwaye ndiza kushenxisa ifenitshala ukuze ihlale.
Ngaphandle kukho itafile encinci enezitulo ezi-2 , yekofu yakho okanye isiselo sangokuhlwa , okanye ukuphumla nje ngencwadi kwaye ubukele ihlabathi lihamba.
I-Shed yamalahle yeyangoku kodwa i-quirky, kunye nokongezwa okuncinci ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kwaye kukhululekile kangangoko kunokwenzeka.
Izinto ezincinci ezongeziweyo:
Kuya kubakho ikofu ye - nespresso , iti ezahlukeneyo , iorenji entsha , iicereals , iziqhamo ezitsha , iyogathi , isonka , ijam kunye nebhotolo xa ufika
Kwaye ngokuqinisekileyo idram yakho yasimahla yewhiskey yokwenza itoddy yokulala eshushu
IShedi yamalahle eNdala ikwilali yokuloba eyimbali yaseFootdee, kwaye ikumgama oziimitha ezingama-50 kuphela ukusuka elunxwemeni nakwizibuko, apho unokubukela amahlengesi, izinja zolwandle kunye nezikhephe eziza kwaye ziphuma echwebeni. Thatha uhambo olukhawulezayo elunxwemeni okanye uhlale nje nekofu yakho yasekuseni. Yilali ezolileyo nenoxolo, kodwa yimizuzu emi-5 kuphela yokuhamba ukuya kwiivenkile zokutyela kunye neeresityu ezisecaleni lolwandle, kunye nemizuzu eli-15 ukuya kumbindi wesixeko.
Ishedi ibekwe eMazantsi eSquare, yenye yezikwere ezi-3, zezindlu zakudala zokuloba kunye neeshedi kunye necawe yayo esekwe kumbindi weNorth Square.
UFittie yenye yezona ndawo zidumileyo zabakhenkethi eAberdeen. Akukho traffic kwi squares , zonke ziipavumente ezindala ezibanzi zokuzulazula kwilali .
Umbuki zindwendwe ngu- Shona
Kukho ibhokisi ephambili kwipropathi evumela iindwendwe ukuba zizihlole ngokwazo , okanye ukuba ukhetha ndingadibana nawe kwindawo .
Ndikufuphi ukuba ufuna ukuqhagamshelana nam nangaliphi na ixesha ngokusebenzisa imiyalezo ye-Air bnb okanye ngomnxeba ukuba kukho iingxaki okanye unxunguphalo.
Unikwa inombolo yam yomnxeba emva kokubhukisha .
Ukuba kukho nantoni na oyifunayo ngaphambi kokufika .i.e ukuthenga ukutya, ikeyiki yokuzalwa, iwayini yesikhumbuzo, iintyatyambo, ndithumele nje umyalezo onesaziso seeyure ezingama-24 kwaye ndingalungiselela yonke into ngokufika kwakho.
Ndikufuphi ukuba ufuna ukuqhagamshelana na…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Footdee